Okwu & Ọnọdụ | Ọkọwa Okwu Ahụike
2 Anabata Edemede Ahụike Ahụike.
3 Ị ghaghị:
4 Nkwupụta onye ọrụ.
5 Hyperlin anyị ọdịnaya.
6 If If.
7 Ichebe ikike.
8 Iwepụ njikọ na weebụsaịtị anyị.
9 Ibu Ibu
11 Ozi Ebe E Si Nweta & Kpọtụrụ.
Anabata Edemede Ahụike Ahụike.
Usoro ndị a na-akọwapụta iwu na usoro maka ojiji nke weebụsaịtị ahụike ahụike.
Site na ị nweta weebụsaịtị a anyị chere na ị nabatara usoro na ọnọdụ ndị a n'uju. Anọgide na-eji weebụsaịtị ahụike ahụike
ọ bụrụ na ịnabataghị usoro niile edepụtara na ibe a.
Nkọwa okwu ndị a metụtara na Usoro na Ọnọdụ, Nkwupụta Nzuzo na Nkwupụta Nkwupụta yana nkwekọrịta ọ bụla ma ọ bụ nkwekọrịta ọ bụla: “Onye ahịa”, “” ”na“ Nke gị ”na-ezo aka na gị, onye na-abanye na weebụsaịtị a ma nabata usoro yana ọnọdụ nke Companylọ Ọrụ. “Companylọ ọrụ”, “Onwe anyị”, “Anyị”, “Anyị” na “Anyị”, na-ezo aka na Companylọ ọrụ anyị. “Ndị otu”, “ndị otu”, ma ọ bụ “Anyị”, na-ezo aka ma ndị ahịa na anyị onwe anyị, ma ọ bụ onye ahịa ma ọ bụ onwe anyị. Usoro niile na-ezo aka na inye, nnabata na nlebara anya nke ịkwụ ụgwọ dị mkpa iji bido usoro enyemaka anyị maka Onye ahịa n'ụzọ kachasị mma, ma ọ bụ site na nzukọ a na-ele anya, ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla, maka ebumnuche doro anya nke nzukọ Mkpa ndị ahịa na ndenye nke ụlọ ọrụ ekwuputara ọrụ / ngwaahịa a, dabere na n'okpuru iwu nke. A na-ewere ojiji ọ bụla okwu a dị n'elu ma ọ bụ okwu ndị ọzọ na otu, ọtụtụ, capitalization na / ma ọ bụ ma ọ bụ na ha, na-agbanwe dị ka ya mere na-ezo aka na otu.Cookies Anyị na-eji ojiji nke kuki. Site na iji weebụsaịtị ahụike nke Health Health kwenyere na ojiji nke kuki dabere na iwu nzuzo nke Natural Health Dictionary. Imirikiti ebe nrụọrụ weebụ ụbọchị taa na-eji kuki iji mee ka anyị weghachite nkọwapụta onye ọrụ maka nleta ọ bụla. A na-eji kuki eme ihe n'akụkụ ụfọdụ nke saịtị anyị iji mee ka arụmọrụ mpaghara a yana mfe iji maka ndị ahụ na-eleta. Offọdụ ndị mmekọ / mgbasa ozi anyị nwekwara ike iji kuki.License
Ọ gwụla ma ekwuputaghị n'ụzọ ọzọ, akwụkwọ ahụike ahụike na / ma ọ bụ ndị nyere ya ikike nwere ikike ọgụgụ isi maka ihe niile dị na akwụkwọ ahụike ahụike ahụike sitere. Ikike ikike arịa amamihe ka edobere. May nwere ike ịlele ma / ma ọ bụ bipụta ibe sitere na https://thenaturalhealthdictionary.com maka ojiji nkeonwe gị dabere na mmachi edebere na usoro ndị a.
Doputa ihe site na https://thenaturalhealthdictionary.com
Ree, gbazite ma ọ bụ akwụkwọ ikike ikikere site na https://thenaturalhealthdictionary.com
Mepụta, mepụtaghachi ihe ma ọ bụ detuo ihe site na https://thenaturalhealthdictionary.com
Tinyegharịa ọdịnaya sitere na Nkọwa Ahụike Ahụike (ọ gwụla ma emere ihe dị iche iche maka ịgbatụta).
Partsfọdụ akụkụ nke weebụsaịtị a na-enye ndị ọrụ ohere ịkọ ma tinye echiche, ozi, ihe na data ('Echiche') n'akụkụ nke weebụsaịtị. Nkọwapụta Ahụike Bekee adịghị enyocha, dezie, ebipụta
ma ọ bụ nyochaa echiche ha tupu ha apụta na weebụsaịtị na Nkwupụta anaghị egosipụta echiche ma ọ bụ echiche nkeThe Natural Health Dictionary, ndị nnọchite ya ma ọ bụ ndị mmekọ. Nkwupụta gosipụtara echiche na echiche nke onye n’enye ụdị echiche ahụ. Ruo n’uzo iwu kwesiri ekwenyere na Nkọwapụta Ahụike Eke Ọrịa agaghị ebu ibu ma ọ bụ ga-akwụ ụgwọ maka Nkwupụta ahụ ma ọ bụ maka ụgwọ ọ bụla, ụgwọ ọrụ, mmebi ma ọ bụ mmefu kpatara ma ọ bụ ahụhụ dị ka ojiji nke ojiji na / ma ọ bụ biputere na / ma ọ bụ Ngosi nke Nkwupụta na weebụsaịtị a.
Nkọwapụta Ahụike Ahụike nwere ikike inyocha Nkwupụta niile na iwepu nkọwa ọ bụla nke ọ na-ahụ na ya zuru oke na-adịghị mma, na-akpasu iwe ma ọ bụ na uzọ ọzọ emebi emebi Usoro na Ọnọdụ ndị a.
Inwere ike biputere nkwupụta gbasara weebụsaịtị anyị wee nwee ikike na nkwenye niile dị mkpa iji mee ya; Nkwupụta ahụ anaghị emebi ikike ikike ọgụgụ isi ọ bụla, gụnyere na enweghị ikike nwebisiinka mmachi.
patent ma ọ bụ ụghalaahịa, ma ọ bụ ikike ikike ọzọ nke ndị ọzọ;
Nkwupụta ndị ahụ enweghị ihe ọ bụla mebiri emebi, ọfụma, iwe, enweghị ihe ma ọ bụ ihe ọzọ emebi iwu ma ọ bụ ihe nke bụ mwakpo nzuzo
Here na-enye gi ikike a sitere na The Natural Health Dictionary nke anaghị akwụghị ikike ịbụ eze ikike iji, mepụtaghachi, dezie ma nye ikike ndị ọzọ iji, mepụtaghachi ma dezie echiche gị na ụdị ọ bụla, n'ụdị ma ọ bụ usoro mgbasa ozi.
Hyperlin anyị ọdịnaya.
Òtù ndị na - esonụ nwere ike ijikọta na Weebụ anyị na-enweghị nkwado ederede:
Ndị na-ekesa akwụkwọ ndekọ ntanetị mgbe ha depụtara anyị na ndekọ nwere ike jikọta saịtị Weebụsaịtị ahụ n'otu aka ahụ ha na-ejikọ aka na ntanetị weebụ nke azụmahịa ndị ọzọ edepụtara; na Azụmaahịa Acc nweta ego Maka Usoro ma e wezụga ịrịọ ndị otu na-anaghị akwụ ụgwọ, ụlọ ahịa ebe a na-ere ihe onyinye ebere, na otu ndị na-enyere ndị nwere ego aka, nke nwere ike ọ gaghị egbochi anyị.
Òtù ndị a nwere ike ijikọta na ibe anyị, na akwụkwọ ma ọ bụ na ozi ndị ọzọ na Weebụ ruo ogologo oge njikọ: (a) adịghị eduhie; (b) adịghị ekwu okwu ụgha na nkwado, nkwenye ma ọ bụ nkwenye nke onye na-ejikọta ya na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ya; na (c) dabara na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ na-ejikọta ya.
Anyị nwere ike ịtụle ma kwado na anyị naanị uche ndị ọzọ njikọ njikọ si òtù ndị na-esonụ:
ebe a na-ahụkarị ndị na-azụ ahịa na / ma ọ bụ ihe ọmụma azụmahịa dị ka Chambers of Commerce, American
Njikọ omogbọala, AARP na Ndị ahịa;
ndị mmekọ ma ọ bụ òtù ndị ọzọ na - anọchite anya ọrụ ebere, gụnyere saịtị inyefe ọrụ,
ajụjụ ọnụ, iwu na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị isi ahịa ha bụ azụmaahịa; na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ na mkpakọrịta azụmahịa.
Anyị ga-akwado arịrịọ njikọ site na ndị otu a ma ọ bụrụ na anyị ekpebie na: (a) njikọ ahụ agaghị egosipụta na anyị ma ọ bụ azụmaahịa anyị nweburu (dịka ọmụmaatụ, ndị otu azụmaahịa ma ọ bụ ndị otu ndị ọzọ
agaghị anabata ụdị azụmaahịa atụnyere, dịka ohere ịbanye n'ụlọ, agaghị enye ohere ijikọ); (b) nzukọ a enweghị ndekọ na-adịghị enye afọ ojuju na anyị; (ch) uru ọ baara anyị
visibiliti metụtara hyperlink karịrị akachasị enweghị; na (d) ebe njikọ dị na ọnọdụ nke ihe ndị metụtara ozi izugbe ma ọ bụ na ọ dabara na ọdịnaya edetu na akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ngwaahịa yiri ya na-aga n'ihu na nzukọ nke nzukọ.
Òtù ndị a nwere ike ijikọta na ibe anyị, na akwụkwọ ma ọ bụ na ozi ndị ọzọ na Weebụ ruo ogologo oge njikọ: (a) adịghị eduhie; (b) adịghị ekwu okwu ụgha na nkwado, nkwenye ma ọ bụ nkwado nke onye na-ejikọta na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ; na (c) dabara na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ na-ejikọta ya.
Ọ bụrụ n’etiti ndị otu edepụtara na paragraf 2 dị n’elu ma nwee mmasị ijikọ na weebụsaịtị anyị, ị ga-eme ka anyị mata ozi site na iji mpempe akwụkwọ ịkpọtụrụ anyị.
Biko tinye aha gị, aha ọgbakọ gị, ozi kọntaktị gị (dị ka nọmba ekwentị na / ma ọ bụ adreesị ozi ịntanetị) yana URL nke saịtị gị, ndepụta nke URL ọ bụla ịchọrọ ịbanye na saịtị Weebụ anyị, yana ndepụta nke URL (s) na saịtị anyị nke ịchọrọ ijikọ.
Biko kwe ka izu 3 were maka nzaghachi.
Òtù ndị a kwadoro nwere ike ịmebanye na saịtị Weebụ anyị dị ka ndị a:
Site na iji ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka enyemaka na-edozi (adreesị weebụ) na-ejikọta ya na; ma ọ bụ
Site n'iji nkọwa ọ bụla ọzọ nke saịtị Weebụ anyị ma ọ bụ ihe onwunwe ejikọtara na nke ahụ dị mkpa n'ime ọnọdụ na usoro nke ọdịnaya na saịtị onye na-ejikọta ya.
Agaghị eji akara njiri mara Ahụike ma ọ bụ ihe osise ndị ọzọ maka ịmekọrịta nkwekọrịta ikikere nke enweghị ebe a.
Na-enweghị nkwenye na nkwupute edere ede ede, ịgaghị enwe ike mebe etiti ibe weebụ ma ọ bụ jiri usoro ndị ọzọ na-agbanwe n'ụzọ ọ bụla ihe ngosi ma ọ bụ ọdịdị nke saịtị Weebụ anyị.
Anyị na-edobe ikike n'oge ọ bụla na naanị ya iji rịọ ka ị wepu njikọ niile ma ọ bụ njikọ ọ bụla na saịtị Weebụ anyị. Agree kwenyere wepu njikọ niile webụsaịtị anyị ozugbo maka arịrịọ. Anyị na-emekwa
idowe ikike idozigharị usoro ndị a yana amụma ya na njikọta ya n'oge ọ bụla. Site n'ịnọgide na-ejikọ gaa na Weebụsaịtị anyị, ị kwenyere ma ịgabiga ma dobe usoro iwu ndị a.
Iwepụ njikọ na weebụsaịtị anyị.
Ọ bụrụ na ịchọta njikọ ọ bụla na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ webụsaịtị ọ bụla nwere njikọ maka ihe ọ bụla, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị gbasara nke a. Anyị ga-atụle arịrịọ iji wepu njikọ mana anyị agaghị enwe ọrụ ọ bụla ịme ma ọ bụ ịzaghachi
Agbanyeghị na anyị na-agba mbọ ịgba mbọ hụ na ozi ndị dị na weebụsaịtị a ziri ezi, anyị anaghị enye ikike ya zuru oke. ma ọ bụ anyị anaghị eme iji hụ na websaịtị ahụ ka dị ma ọ bụ na ihe ndị dị na ya
webụbụsaịtị ka na-eme ọhụụ.
Anyị agaghị enwe ibu ọrụ ma ọ bụ ụgwọ maka ọdịnaya ọ bụla na-egosi na saịtị Weebụ gị. I kwenyere ka anyi kwusi ma chedo anyi gbasara ebubo nke ibilite na websaịtị. Enweghị njikọ (s) ọ bụla pụtara na ihe ọ bụla
Ibe a na saiti Weebụ ma obu n’ime onodu obula nke nwere ọdịnaya ma obu ihe ndi apuru ighota dika nnwere onwe, okwu ojoo ma obu onye omekome, ma obu nke mebiri, ma o bu na-akwado iwu a, ma obu n’emebi iwu nke ndi ozo.
Ruo n'ogo kachasị na iwu nyere, anyị na-ewepu ihe nnọchiteanya niile, ikike na ọnọdụ metụtara weebụsaịtị anyị yana iji weebụsaịtị a (gụnyere, n'enweghị njedebe, ikike ọ bụla nke iwu nyere maka àgwà dị mma, mma maka nzube na / ma ọ bụ iji nlezianya na nkà kwesịrị ekwesị). Enweghị ihe ọ bụla n'ime nkwekọrịta a ga:
machibido ma ọ bụ wepu anyị ma ọ bụ ụgwọ gị maka ọnwụ ma ọ bụ mmerụ onwe onye site na nleghara anya;
wezuga ihe ọ bụla ma ọ bụ ibu gị nke a na-agaghị ewepụrụ n'okpuru iwu dị adị.
Mkpesa na ikepu ibu nke edebere na ngalaba a na ebe ozo na nkwuputa a: (a) di na paragraf bu ụzọ; na (b) na-achịkwa ụgwọ niile na-ebilite n'okpuru onye ngbagha ma ọ bụ
n'ihe gbasara isiokwu a, gbadoro ụgwọ maka nkwekọrịta, na mmekpa ahụ (gụnyere ileda anya) yana imebi iwu nke iwu. Ruo n’onyinye webụsaịtị ahụ na ozi na ọrụ dị na webụsaịtị ahụ n’anaghị ụgwọ, anyị agaghị ebu ụgwọ maka mbibi ọ bụla ma ọ bụ mmebi nke ọdịdị ọ bụla.
Ozi Ebe E Si Nweta & Kpọtụrụ.
Emepụtara Usoro iwu na ọnọdụ a na generaandconditionstemplate.com. Y’oburu
ajụjụ ọ bụla gbasara usoro anyị, biko kpọtụrụ anyị site na iji mpempe akwụkwọ anyị.